Uyifaka njani i-MAME emulator ku-Ubuntu | Ubunlog
Uyifaka njani i-MAME emulator kwi-Ubuntu
UPablo Aparicio | | Imidlalo, Ubuntu
Ukuba, njengam, udlale oomatshini be-arcade yeklasi ye-80s-90s, ngokuqinisekileyo uyazi i-MAME emulator. Zizo ezo izifinyezo ze Multiple Arcade Machine Wendlela yesiphelo kunye enomzami wokulungisa indlela esivumela ukuba sidlale ezo zihloko sazithanda kakhulu nakwesiphi na isixhobo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, ikwafumaneka Ubuntu kwaye ukufakelwa kwayo kulula njengokuchwetheza eminye imiyalelo kunye nokwenza ezinye iitshekhi. Ewe ndincoma umonde kuba sinokuhlala sishiya into ekufuneka siyenzile kwaye sinokuzibona simangalisiwe kukuba asiboni mfanekiso uphambili kweli nqaku. Apha ngezantsi sichaza amanyathelo ekufuneka siwalandele ukuze dlala iMAME imidlalo kwi-PC yakho nge Ubuntu.
Uyifaka njani iMAME ku-Ubuntu
Elona candelo libalulekileyo lenkqubo kukuba nemidlalo ethile okanye IiROM ukuba siyazi ukuba bayasebenza. Ukuba nomsebenzi osebenzayo wonele, kodwa kunokuhlala kukho ukungangqinelani ne-BIOS kwaye ukuba sithembela kumdlalo kwaye kuvela ukuba awusebenzi, siza kuphambana sizama ukusombulula ingxaki. Ke ngoko, kungcono ukubeka imidlalo emininzi kwindlela oza kuyibona kamva. Nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele ukufaka kunye nokuqhuba iMAME ku-Ubuntu:
Njengamaxesha onke kwezi meko, ngakumbi ukuba sifuna ukufumana uhlaziyo lwamva kwiphakheji, siya kufaka indawo yokugcina ye-SDLMAME (olunye ulwaziNgokuvula i-terminal kunye nokuchwetheza:
Emva koko, sihlaziya indawo yokugcina ngomyalelo:
Ngoku sifaka i-emulator:
Ungafaka kwakhona i-mame-tools package, kodwa andinayo ifakwe kwaye andinangxaki.
Ngoku kufuneka sisebenzise i-emulator (iya kunika impazamo) kwaye ujonge ukuba «mame» ifolda yenziwe kwifolda yethu yobuqu. Ukuba oku akunjalo, sidala ngomyalelo:
Ngaphakathi kule folda kufuneka sibeke imidlalo, ke sidibanisa iiROM.
Okokugqibela, sivula iMAME kwaye sijonge ukuba iyasebenza na.
Eminye imidlalo ayinakusebenza, ke ndihlala ndicebisa ukwenza ukukhangela kwi-intanethi "ngayo yonke i-mame bios", eya kusivumela ukuba sifumane iphakheji enezinto ezininzi ze-BIOS eziyimfuneko kwimidlalo emininzi yokusebenza. Iphakheji ekhutshelweyo kufuneka icinezelwe kwaye ngaphakathi kuya kubakho iifayile ezininzi ezixineneyo ekufuneka sizibekile, ngaphandle kokucinezelwa, kwifolda efanayo «iirom» apho sibeka khona imidlalo.
Ngaba ukhe wayizama? Unganqikazi ukushiya kwizimvo ukuba uyenzile kwaye uhambe njani. Ewe ulumkele ngezitshixo zekhompyuter
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Uyifaka njani i-MAME emulator kwi-Ubuntu
UDavid portella sitsho
Molo kukho impazamo kwinyathelo 2, apho ithi
$ sudo apt-fumana uhlaziyo lokufaka
Phendula kuDavid Portella
Kulungile, enkosi ngenqaku. Ilungisiwe.
Molo, uthini nge-Ubuntu 15.10 kunye ne-16.04 yexesha elizayo? Kungenxa yokuba indawo yokugcina engenalo iMame iqokelelwe kwezo nguqulelo. Enkosi
Ndiyivavanye ku-Ubuntu 15.10 (loo skrini yam yeyam) kwaye iyasebenza.
Molo, ndineBuntu 15.10 kwaye ayifaki indawo yokugcina eyabelweyo xa uhlaziyo lufumanekayo lunikezelwa…, ndisayifaka, kodwa ayisebenzi.
Impazamo ebonakala xa kulayishwa i-rom zezi zilandelayo: «umdlalo okhethiweyo ulahlekile enye okanye ezingaphezulu ezifunekayo kwimifanekiso ye-rom okanye ye-chd», ungandinceda? Ndiyabulela kakhulu
Ndiyifakile kodwa akukho nto iphumayo…. Ndiyilungisile impazamo ebonakaliswe ngugxa, kodwa andiboni ukuba yintoni iMAME ephumezekayo naphi na…. naziphi na izimvo ??? kuba kwisikhangeli asikhuphi ... ndingasiphumeza njani? iphi ?? ifakiwe?
Molo, belial. Kwi-Ubuntu, kubonakala njengayo nayiphi na enye into. Kukhe kwenzeka kum ukuba ndifake into kwaye ayibonakali ukuba andiyi kuyiqala kwakhona iseshoni okanye ikhompyuter. Zama ukubona. Uqinisekile ukuba ifakwe?
UJose Miguel Gil Perez sitsho
Ngoku iza ngokungagqibekanga ui eyi-oxtia. Nangona ndicebisa ukuba uyiqokelele kwaye uyihambise kwiprosesa yakho, umahluko ukhohlakele. Ewe kunye nee-tweaks ezimbalwa kwi-mame.ini ziyenza ngcono kune-Windows.
Phendula kuJosé Miguel Gil Pérez
Sele ndikwazi ukuyifaka, kodwa ngoku ingxaki yam kukuba andifumani fowulda yokufaka iirom. Kwithiyori indixelela ukuba isendleleni USR / GAMES / MAME…. kodwa xa ndivula iMidlalo yolawulo ngaphakathi kwe-Usr akukho folda yeMame. Ndizamile ukubona ifolda yemidlalo ngeefayile ezifihliweyo kodwa ayikho, kukho kuphela i-mame ephumezekayo… .. naziphi na iingcebiso?
Ok sele ndiyifumene i-XDD uff andikacacisi ngemikhombandlela e-Ubuntu ... ndiyaxolisa ngengxaki.
Xa uyivula okokuqala, kufuneka yenze ifolda "mame" ngaphakathi kwifolda yakho (ekhaya). Ukuba ayenzi njalo, uyila ngesandla. Ngaphakathi kufuneka ibe yifowulda «iirom» kwaye apho kuya kufuneka ubeke imidlalo. Kufanelekile ukubeka uninzi kuba ezinye zinokungasebenzi. Ngapha koko, kuye kwafuneka ndivavanye ezimbini kwaye inye kuphela esebenzayo.
Molo, iposti yakho ayisebenzi kwaye ndenze yonke into kwaye akwenzeki nto, indibuza i-chd kwaye ndafaka iirom kuyo kwaye akukho nto yenzekayo
Akunyanzelekanga ukuba yenze «iROMS» ifolda kwifolda yakho yobuqu, ngokungagqibekanga, iyayila kwi-usr> yendawo> isabelo> imidlalo> i-mame> iirom, ungayijonga.
Ukuphunyezwa kufakwe kwi-usr> imidlalo> mame
Unokwenza ukungena kwi-launcher, nangona i-icon yangokwezifiso, kulula kakhulu.
UGuillermo Carlos sitsho
Mfutshane kakhulu kwaye ilungile, ndiyithanda kakhulu inkcazo yolu fakelo. Ndiyabulela kakhulu. kwaye ungachaza ukuba ungayifaka njani i-retropie kunye nendlela yokuyiqwalasela.
Phendula uGuillermo Carlos
Faka i-QMC2, yindawo ephambili ecacisiweyo kwaye iyinzalelwane yeLinux, uphuhliso luyekile kodwa lusebenza ngokumangalisayo.
Ubuntu 16.04 LTS izakushiya iCatalyst / Crimson kwaye ibonelele kuphela ngabaqhubi basimahla (AMDGPU)
Uyenza njani imibala yeTheminali